AR Moto Miku – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2020
✈️ आयात गर्नुहोस्
🏭 वायु प्रदूषण
एक इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ? एक स्कूटर भाँडामा लिनुहोस् !
Nepal मा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच्न चाहानुहुन्छ?
हामी व्यावासायिक साथीको खोजीमा छौं।
AR Moto Miku
1,500 चक्र ℹ
मिकु एक इलेक्ट्रिक मोपेड हो जुन मेक्सिकोबाट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल स्टार्टअप एआर मोटोले निर्मित गर्दछ। कम्पनी मेक्सिकन शहरहरूमा वायु प्रदूषण कम गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्यको साथ २०१ 2019 मा स्थापित भएको हो।
मिकुसँग अद्वितीय डिजाइन छ जुन लोकप्रिय साबित भएको छ। मोपेडसँग आरामदायी ड्राइभि experience अनुभवको लागि ठूलो रियर व्हील छ।
मोपेडसँग km० किमि प्रति घण्टाको शीर्ष गतिको लागि १,500०० वाट इलेक्ट्रिक मोटर छ।
मोपेडसँग Ah० किमि लामो ड्राइविंग दायराको लागि २० एएच लिथियम ब्याट्री छ। ब्याट्री उच्च गुणवत्ताको छ।
मोपेडसँग अगाडि र रियर डिस्क ब्रेकहरू छन्।
2020 AR Motos मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै AR Motos स्कूटरहरू हेर्नुहोस्:
मार्च 1, 2020 (अद्यावधिक गर्नुहोस्)